नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गठबन्धनको दलालीमा लागेको आरोप लगाएका छन् । माओवादीको प्रचण्डपथ छोरी र भाइको नियुक्तिमा गएर पतन भएको उनले टिप्पणी गरे ।
कास्कीको पोखरामा सोमवार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डको चर्को आलोचना गरेका हुन् । ‘छोरीलाई नजिताए राष्ट्रमा संकट आउने, जिताएमा प्रसन्न भएर गठबन्धनको दलालीमा लाग्ने रे ! देख्नुभयो के रहेछ राजनीति ? फेरि प्रचण्ड चिन्न बाँकी रह्यो ?,’ ओलीले भने, ‘माओवादीमा बिर्को मात्र छ, भाँडो एमालेमा आइसक्यो ।’
गठबन्धन दलसँग देश विकासको भिजन नरहेको र एमालेले चुनाव जितेमात्र देशको विकास हुने उनले दाबी गरे ।
कसैलाई जिताउन वा हराउन होइन, संविधानको रक्षा गर्न गठबन्धन- कांग्रेस उपसभापति खड्का